အိုဘားမား၊ အမေစု၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ကချင် ရခိုင်အရေးနှင့် ကျနော့်အတွေး | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Planning to cover up about the Religious Problems that happened in Myanmar from US President Mr. Obama
မွန်ပြည်နယ်တွင်း ဂဏ၀ါစက သံဃာကွန်ရက်ဟု အမည်တပ်ပြီး အစ္စလာမ် ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ဆောင်နေ »
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးသမား သက်သက်မဟုတ်သော လူထုခေါင်းဆောင် (National Figure) ဖြစ်သည့် အမေစုအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာတွင် နိုင်ငံရေး ပုံရိပ် (Image) ဆက်လက် ကောင်းနေပါမှ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ၏ ထောက်ခံ၊ စောင်မ၊ စောင့်ရှောက်မှုကို အပြည့်အဝ ရရှိနိုင်ပါမည်။
Tags: Asia, Burma, Business, Business and Economy, Diplomacy, Japan, New Zealand, Turkmenistan
This entry was posted on November 16, 2012 at 10:31 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.